के प्रार्थना गर्नु वा आफ्नो भगवानलाइ पुकार्नु मात्र धर्म हो त? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
के प्रार्थना गर्नु वा आफ्नो भगवानलाइ पुकार्नु मात्र धर्म हो त?
२०७७ आश्विन ३०, शुक्रबार १६:२१:००
धर्मको अर्थ ब्यक्तिगत र सम्प्रदायिक स्वार्थ अनुसार फरकफरक हुँदै गैरहेको छ।कुनै सम्प्रदाय वा समुदायले पुजा गर्नु ,पाठ गर्नुलाइ धर्म मान्छन ,कोहिले नमाज पढ्नुलाइ त कोहिले बाइबलको अनुसरण गर्नुलाइ धर्म मान्छन।
धर्म भन्नाले सर्बप्रथम आफूभित्र भएको नकारात्मकतालाई हटाइ सकारात्मक गुणलाइ चिन्नु हो । जब तपाईं भित्र सकारत्मक्ताको ज्योती बल्न सुरु हुन्छ तपाइलाइ के कुरा ठिक र के कुरा बेठिक छुट्ट्याउने शक्ति उत्पन्न हुन्छ । तब मात्र तपाईं संवत् धार्मिक बन्नु हुन्छ। तपाइलाइ त्यस बेला धर्मको मर्म थाहा हुन्छ। धर्म तपाइ भित्र भएको सकारात्मक र उच्च कोटिको भाब हो। धर्मले तपाइलाइ राम्रा कुरा सिकाएको हुनुपर्छ। तपाइलाइ माया, प्रेम,स्नेहा,करुणा ,मिहेनत,आदर ,सम्मान ,र हरेक जातजाती,प्राणी समान हुन भन्ने भावना मन देखि पैदा गरेको हुन्छ भने सोच्नुस तपाईं धार्मिक हुनुहुन्छ।धर्मले हामिलाइ एकजुट हुन सिकाउछ।
धर्मको मुल अर्थ भनेको भिन्न भिन्न बिचार भएका हामिलाइ एकिकृत बनाउनु हो। तर आजभोली सँसारमा धर्मको नाममा गरिने स्वार्थी तबरका धार्मिक कृयाकलापलेनै एक अर्कालाइ फुटाइरहेको छ। आआफ्ना ब्यक्तिगत स्वार्थलाइ आधार मानेर बनाइएका धार्मिक सँस्था वा धर्मको नाउँमा गैर राजनिती गर्नेहरुको कारण धर्मको पबित्रता माथि नै दाग बस्न गएको छ।
वास्तविक धर्मले कोहि कसैलाइ विभेद र बिभाजन गर्दैन।अहिले धर्मका नाउँमा गरिने तछाडमछाड केबल स्वार्थी बिचार बाट उत्पादित धर्मको नामका अधार्मिक कृयाकलाप हुन। लामो समय देखि धर्म र बिचार माथी खेलबाड हुँदै आइरहेको छ । आआफ्ना स्वार्थलाइ मध्यनजर गर्दै आफ्नो फाइदा को लागि ग्रन्थको नाउमा जबरजस्ती डर ,त्रास ,भय र अज्ञानता फैलाउने काम भैरहेको छ। आफ्ना ग्रन्थमा भएका नराम्रा र असान्दर्भिक कुरा पनि सहि र अरुका ग्रन्थमा भएको राम्रा कुरा पनि गलत भनेर दुस्प्रचार गर्ने चलन छ । तर वास्तविक र सहि धर्म ले यो भन्दैन । धर्मले यो भन्छ की सबैको बिचार सुन । सबैलाइ बुझ्ने कोशिस गर । उनिहरुबाट सकारात्मक कुरा सिक । नकारात्मक कुरालाइ बेवास्ता गर। धर्म भनेको सिकाउने र घोकाउने कुरा होइन। धर्म अन्तरमन देखि नै महशुस हुनुपर्छ।म कुन बाटोमा छु, मेरो कर्तब्य के के हो ,म भित्र कोहि कसै प्रती घृणा र नकारात्मक भावना नभइ प्रेम र सकरात्मक बिचार छन कि छैनन रुभन्ने बिचार जब मन देखि महशुस गर्नु हुन्छ तब तपाईं धार्मिक बन्नुहुन्छ।
मुख्य कुरा त धर्मले हामिलाइ अनुशासन सिकाउछ,धर्मले हामिलाइ कर्म सिकाउछ,धर्मले प्रेम सिकाउछ,धर्मले आफ्नो कला पहिचान,सहयोगी भावना जागृत गराउछ।धर्म बिभाजित हुनुहुदैन। सबैको मनमा धर्म भनेको नै सेवा र सम्मान हो भन्ने हुनुपर्दछ। धर्म भनेको एकजुट हुनु हो भन्ने बिचार हुनुपर्दछ। धर्मले जात छुट्ट्याउदैन । धर्मले धनी गरिब छुट्ट्याउदैन । धर्मले तपाईं र म छुट्ट्याउँदैन।
धर्मले केबल प्रेम बुझ्छ,सहयोग बुझ्छ,सेवा बुज्छ, सकारात्मक बिचार बुझ्छ, मिहेनत बुझ्छ। तर धर्म बुझ्नु अगाडि हामीले आफुलाइ बुझ्नु जरुरी छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक
ओलीमाथि फेरि हमला गर्ने प्रचण्डको तयारी, विरोधीको जहाजमा मुस...
भत्ता फिर्ता गरेर मात्र शासकलाई चोख्याउन सकिने छैन
संसदीय सुनुवाइः उजुरीकर्ताको पछि लाग्ने कि निर्णयकर्तालाई नै...
के ओलीले भीर खोजेकै हुन् त ?
नेकपाको त्रिपक्षीय रणनीतिक प्रहार होनहार नेता–कार्यकर्तामाथि